Isilimela 22, 2018 admin
Court evunyelwa Mt. isicwangcwiso sentlawulo Gox
Mt. Gox ababolekisi ezi elinye inyathelo ngakumbi ukufumana $450 ngalinye Bitcoin walahlekelwa. I Tokyo INkundla yeSithili bayalelwa ukuba bayeke inkqubo yimali kwaye uqale inkqubo yesiqhelo civil.
i Mt. Gox Trustee, Nobuaki Kobayashi, akayi kuthengisa na Bitcoin ngakumbi - ubuncinane ukwenzela elizayo de babatyalayo ziya kubuyiselwa kwi Bitcoin ngo 2019.
Mt. Gox. izilawuli 137,890.96 BTC ($880M USD) okanye 0.81 ekhulwini bitcoins ngoku khona, nokwabiwa ezi mali babe negalelo kwiimarike cryptocurrency kunyaka olandelayo.
Bahamas lolingelo imali yedijithali-mboleko evela kurhulumente
I-Central Bank of Bahamas izicwangciso iprojekthi elilinge currency yedijithali. Isibhengezo kuSekela-Prime Minister / uMphathiswa wezeMali, K. Peter Vula Quest, senziwe i Blockchain kunye Cryptocurrency Conference Bahamas ukuthatha indawo le veki.
Turnquest uthemba ukuba Bahama Grand iya kuba liziko yedijithali ukuba ummandla lonke.
Uthe: "Ukuveliswa inkonzo mihla intlawulo yedijithali ngokupheleleyo indlela phambili kule xesha wolawulo. A lwemali digital Bahamian kubaluleke ngokukhethekileyo ukuba Islands amaninzi Family njengoko sele sibonile neebhanki zorhwebo ezininzi wehlise ndaxhwitha abahlali babo, ebashiya ngaphandle iinkonzo zebhanki.”
Imiyalelo FSA yaseJapan Bitflyer ukuba kumiswe ubhaliso ezintsha akhawunti ikhale ngokwaneleyo KYC / AML
Enye enkulu ukutshintshiselana Bitcoin yaseJapan, nge umthamo yorhwebo of $ 65M kwixesha elidlulileyo 24 iiyure, udize namhlanje abaye bafumana i "isohlwayo solawulo 'yi-FSA Japanese iimfuno ezingonelanga KYC / AML.
Bathi a ityala sele kufikelelwe ukuphumeza isicwangciso sophuculo.
Ngoku ukuba ihlole onke amaxwebhu abathengi nokuchongwa lwangoku kwaye abuze abanye babo ukugqiba inkqubo yokuchonga kwakhona.
Ngeli xesha, zonke iifom zobhaliso akhawunti entsha ebhatalwa okwethutyana de "abathengi ezikhoyo iwonga kunye nobuwena kuhlaziywa kwaye kwaqinisekiswa & inkqubo yolawulo lwangaphakathi luyomelela. "
iintengiselwano Crypto Ugqwesile intengiso ikhadi lamatyala Silicon Valley izacholo ivenkile
I-CEO ye Jewelry Stephen Silver Fine luveze ukuba iintengiselwano cryptocurrency ziye ngaphaya intengiso ikhadi lamatyala evenkileni ngemiyinge 20% kwentengiso yenkampani ngoku ezibangelwa cryptocurrency.
CEO Stephen Silver uthe ivenkile yakhe izinto yaba izacholo kwabathengisi yokuqala ehlabathini ukwamkela cryptocurrency emva 2014.
New blockchain ETF ngokubhengezwa kwi Toronto Stock Exchange
A ETF blockchain omtsha iza kuqalisa urhwebo ngoLwesine kwi Toronto Stock Exchange, umnikelo sesichengeni iziseko emva ubuchwepheshe ephazamisayo.
Le ngxowa-mali zexa elizayo iza kugxininisa hardware kunye iinkonzo ngokwendlela Steve Hawkins, igosa co-eliyiNtloko lesiGqeba lwexa elizayo ETFs Management Canada Inc.
zorhwebo Le ETF ziquka iinkampani ezifana semiconductor siqinile Nvidia Corp.
Ingxelo Daily Market Kraken for 21.06.2018
$93.5M wasebenza kuzo zonke iimarike namhlanje
Post Previous:Blockchain News 21.06.2018
Post Next:Blockchain News 23.06.2018